Sunday November 23, 2014 - 11:45:41 in Wararka by Super Admin
Jeneraallada Masar oo caan ku ah ilaalinta xadka Yahuudda ayaa hadda ku kacaya falal qof walba uxaqiijinaya in melleteriga Masar ay yihiin kuwa ku dhaqan Yahuudda oo aan saas ah aan dhaamin marka laga fiiriyo ficilladooda iyo gummaadka dadka ahlu towxiidka ah oo aykawada simanyihiin.
Nidaamka Masar ayaa bilihii dambe bilaabay in uu lajahro shaqada muhiimka ah ee uu u hayo Yahuudda iyo sida uu qeybta uga yahay hareernta magaalada qaza lagu saaray malaayiin muslimiin sacboolay ah.
Maamulka daba dhilifka ah ee dalka Masar ayaa ku fashilmay dayaacado waxba kama jiraan ah oo warbaahinta afkiisa ku hadasha ay faafiyeen, taas oo ka dambeysay kadib markii ay ku ku eedeeyeen Mujaahidiinta ka dagaallama gobolka Seynaa in ay ka dambeeyeen weerar uu khasaare kasoo gaaray dad shacab ah oo maalmo ka hor ka dhacay gobolkaasi.
Dadka ku nool gobolka Seynaa oo dhacdadan ka warbixiyay ayaa sheegay in diyaarad duuliye la'aan ah oo Yuhuuddu leedahay ay laba maalmood ka hor duqeyn ka geysatay guri laba dabaq ka kooban oo kuyaalla meel u dhow tuulada Al-Mahdiya ee Koonfurta magaalada Rafax, iyadoo markii hore diyuuraddu ay hal gantaal ku ridday guriga, kadibna markii ay dadka deegaanku halkaas kusoo xoomeen ay markale soo noqotay ayna billowdo inay beegsato dadkii meesha isugu soo baxay.
Ugu yaraan 15 ruux oo ay ku jiraan dumar iyo carruur ayaa ku dhintay duqeynta, warbaahinta Nidaamka Dhaaguutka ee Masar ayaa si kas ah uga been sheegtay dhacdada, iyadoo baahisay in falka meesha ka dhacay uu ahaa gantaal ay koox hubeysan la beegsadeen guri ay daganaayeen dad rayid ah, taas oo fadeexad iyo weji gabax ku noqotay.
Nin goob jooge ahaa markii uuu falku dhacayay ayaa u sheegay Shabakadda Seynaa24 in guriga la beegsaday uu daganaa mid ka mid ah hogaamiyeyaasha dhaqanka gobolka Seynaa oo lagu magacaabo Axmed Naasir Fariix, lamana oga sababta ka dambeysa duqeynta ay diyaaradaha duuliye la'aanta ee Yuhuuddu ay ninkaas u bartilmaameedsadeen.
Maamulka Riddada ah ee xoogga ku qabsaday talada dalka Masar ayaa xiriir iyo wada shaqeyn la leh Yuhuudda, iyadoo bilihii lasoo dhaafay Ciidmada Maamulkaas ay sii xoojiyeen howlgallada ay ka wadaan deegaannada kuyaalla xuduud beenaadka u dhaxeeya dalka Masar iyo dhulka ay Yuhuudda xoogga ku heysato.
Kumanaan qoysas ah oo ku noolaa deegaannada Xuduudda kuyaalla ayay Dowladda Masar dhowaan ku amartay inay halkaas ka guuraan, tallaabtaas ayay Xukuumadda Qaahira sheegtay inay u qaadday si loo xaqiijiyo ammaanka Gobolka, kadib markii ay halkaas kusii xoogeysteen Jamaacaatka Jihaadiga ah ee Salafiyiinta ah.
Maamulka Masaarida ayaan qarsan hiilka iyo taageerada uu u hayo Yuhuudda, wareysi uu dhowaan bixiyay Jeneraalka khaa’inka ah ee talada dalkaasi xoogga ku qabsaday ee lagu magacaabo Cabdul Fataax Siisii ayuu ku sheegay inaysan marnaba ogolaaneyn in gobolka Seynaa uu noqdo meel laga khal khal geliyo ammaanka Yuhuudda ama ay noqoto goob laga abaabullo weerarro lagu qaado dowladaha deriska.
" waxaan qaadeynaa tallaabooyin dheeraad ah oo aan ku xaqiijinneyno ammaanka, marnabana ma ogolaan doono in Masar ay noqoto saldhig ay isku uruursadaan argagixisada" ayuu hadalkiisa kusii daray Jeneraalka dhiigyo cabka ee As-Siisii oo la hadlayay Tv-ga France 24 ee laga leeyahay dalka Faransiiska.
Dhinaca kale Cabdul Fataax Siisii mar uu soo hadal qaaday sababaha ka dambeeya in gobolka Seynaa ay kusii xoogeystaan Jamaacaatka Jihaadiga ee Salafiyiinta ah ayaa waxa uu xusay in Qaddiyadda Filastiin ka taagan ay tahay sababta ugu weyn oo dhallinyaro badan oo Muslimiin ah ay ku qacnaan waxa uu ugu yeeray Fikaradaha Argagixisada, isagoo qiray in awoodda Meliteriga oo kaliya aysan xal u noqon karin in lagu wajaho Jamaacaatka Jihaadiga ee ka howlgala gobolka Seynaa ee Waqooyiga dalka Masar.